I-The Labyrinth® - I-Airbnb
I-wifi esheshayo engu-94 Mbps, kanye nendawo yokusebenzela ekamelweni.
Jabulela futhi uphumule endaweni eyingqayizivele futhi yasendle, lapho ungajabulela khona ama-sunris amangalisayo, ubusuku benyanga obumangalisayo nokubukeka okumangalisayo kolwandle okungaphansi kuka-10M, endlini enhle nethokomele efanele indawo ezungezile.
Kutholakala amamitha ambalwa ukusuka ku-cove enhle, imizuzu engu-15 ukusuka esikhumulweni sezindiza saseNingizimu, ixhunywe ngokuphelele emigwaqweni emikhulu, izungezwe izindawo zokudlela zezinhlanzi ezidumile, kunemizila emihle namakhona ezithandani.
Ifulethi linegumbi elikhulu lokuphumula elinokubukwa kolwandle, ikamelo elinombhede olala abantu ababili, ikamelo lokugezela nekhishi elihlukile. Ukupaka kulula kakhulu njengoba phambi kwendlu kuhlale kunendawo yokupaka uma nje iminyango yegalaji ingavinjelwe.
I-wifi esheshayo – 94 Mbps
I-HDTV engu-50" ene- I-Amazon Prime Video, Apple TV, I-Chromecast, Disney+, I-HBO Max, I-Netflix, ikhebula ye-premium, Isevisi evamile ye-cable kamabonakude
4.98 · 240 okushiwo abanye
Indlu isendaweni yokudoba yezakhamuzi ezimbalwa, ethule kakhulu, kude nezindawo ezinkulu zezivakashi, iyindawo lapho ukuthula kubusa khona, ngaphandle kwethrafikhi, ngaphandle kwezixuku zabantu.
Ukuhambahamba imizuzu engu-10 yidolobhana lase-Tajao, lapho izindawo zokudlela zezinhlanzi ezinhle kakhulu ziningi khona, ezidumile kuso sonke isiqhingi.
Uma ufuna okokuzithokozisa okunokuthula nokuzola, ukuhlukaniswa kodwa ngesikhathi esifanayo kuxhumene kahle nemigwaqo emikhulu, indawo yokuqeda njengabantu abashadile, ujabulele ukushona kwelanga okuhlaba umxhwele, lokhu kungaba indawo enhle.
Kudingeka imoto ukuze ifike endlini.
Ngiyathanda futhi ukukhumbula ukuthi isimo sezulu singaguquguquka, kusukela ezinsukwini ezihlaba umxhwele zolwandle oluzolile, kuya ezinsukwini zomoya nolwandle olubucayi, kokubili kimi zinobuhle obuningi, empeleni kuyisipiliyoni sasendle amamitha ambalwa ukusuka olwandle.
Okuthile okuhlukile okunobuntu obuningi.
Ngithanda ukushiyela izivakashi indawo nobumfihlo, ukungena nokuphuma endlini kwenziwe ngokuzimela kodwa ngizotholakala njalo ngengxoxo yale app ye-Airbnb kanye nezimo eziphuthumayo ocingweni + Atlan18298799.